GW’s AcTiOn4AuNg SaN’s BiRtHdAy !!! | News, Art and Ideas For Burma
GW’s AcTiOn4AuNg SaN’s BiRtHdAy !!!
Filed under: DAYS TOPICS, GENERAL AUNG SAN, OTHERS' NEWS — Nyo Gyi @ 11:24 am
ကျနော်တို့ Generation Wave (မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်းအရုံး)မှဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မည့်မြန်မာ့သူရဲကောင်း အာဇာနည် သခင်အောင်ဆန်း၏မွေးနေ့ကို ရည်စူး၍ ဂုဏ်ပြုလှုပ်ရှားမှုတရပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ယခုလှုပ်ရှားမှုကို ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာလမှစတင်ပြီး တိတ်တဆိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းနေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော ငွေစက္ကူများပေါ်တွင် သခင်အောင်ဆန်းပုံများကို ရိုက်နှိပ်ပြီး လက်လှမ်းမီသမျှဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။